sms back up and restore pro - .::just for share::.
Home » android » android tools » sms back up and restore pro
sms back up and restore pro
credit >>> ရိုးကြယ်
refer >>> mmas
sms back up and restore pro .apk(1.02Mb)ပါ။ ကိုယ့်ဖုန်းထဲကိုလာတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေကို မှတ်ထားသိမ်းထားလို့ရတဲ့applicationလေးပါ။ (အင်တာနက်ကမက်ဆေ့ခ်ျတွေတော့မပါဘူးနော်)။ SMS တွေကိုbackup လုပ်ပြီးSD card ထဲသိမ်းလို့ရတဲ့ဟာလေးပါ။ အဆင်ပြေကြပါစေ
မှတ်ချက်။ ။ သမီးရည်းစားများပြသနာဖြစ်လျင်ကျနော်မပါပါချင်။ ခိခိ(နောက်တာမနေ့ညကmmasကဒေါင်းပြီးပြန်တင်ထားတာလေးပါ။
download >>> mediafire , copy